Izinkuni lodonga izindonga kancane abe enye yasekuqaleni ukuba izindlela yendabuko kokuqeda izindawo ngezinhloso ezahlukene. Abakwazi esikhundleni KaMose, lodonga abavamile, usimende zokuhlobisa nopende. Ngaphansi wathi gama lisikisela ezihlukahlukene izinto, kodwa ngamunye wabo kuletha ukufudumala kanye touch of style wezangaphakathi. Into esemqoka esizoheha abathengi - ke asikho isidingo uthintane ochwepheshe ukuze ifakwe.
Okunhlobonhlobo lodonga lokhuni
zingatholakala emakethe okuthiwa lodonga yokhuni kancane afana ajwayelekile. Lokhu kwaziswa kuyinto panel okuqinile, ezithinta ifomu uvalwe owufanelekela komunye nomunye slats. Ububanzi yabo ingase yehluke kuye ngesistimu izinqumo design, kanye ukushuba kungaphansi kwama-2 ngamasentimitha. Phakathi izinzuzo a sekugcineni ezinjalo, ungakhetha umsindo ezinhle futhi ukushisa ukwahlukanisa, ukubukeka eliyingqayizivele, futhi ikhono ukudala nale ukunethezeka kwezinto ezibonakalayo eliyingqayizivele futhi microclimate. Izindonga izithombe eseqedile ngedatha, uzophefumula, ukuhlinzeka ukupholisa zemvelo.
Lapho ekhetha lodonga lamapulangwe izindonga, uqiniseka ukuba banake imikhiqizo ezenziwe ngokhuni thermomodified. Ngo inqubo yokukhiqiza izinto ezasetshenziselwa is phansi umthelela ezishisayo, ngokucindezela nokucindezelwa. Ngenxa yalokho kungenzeka ukufeza okhushuliwe umlilo ukumelana, ukumelana zangaphandle amathonya mechanical futhi ihlala isikhathi eside. Uma ucabangela izinzuzo lodonga thermomodified ugodo ungakwazi ukuhlukanisa namandla high, umswakama oxosha izici, kalula ukufakwa kanye okusezingeni eliphezulu isikhalazo yobuhle.
Ngemva kokuphothulwa udonga kokuqeda ukwaziswa okunjalo kungaba ngaphansi ukumanzisa yokuhlanza. Izinkuni lodonga izindonga zingenziwa emagxolweni se-oki. Kulokhu, indaba libizwa kukakhokho iphepha lokunamathisela odongeni, futhi zibiza kakhulu ukukhokha ngokugcwele off izinga okungenakuqhathaniswa ukusebenza lengenamaphutsa. Isendlalelo Amagxolo kakhokho ngokwanele nomzimba omncane, lapho isetshenziswa base iphepha kanye ebusweni camera nge enamathela wax. Finishing ezahlukene kwedivayisi emvelweni, ikhono dudula izintuli nokungcola, umswakama ukumelana, nokumelana umlilo.
Ukuhlobisa izindonga nge lodonga lokhuni
Uma ukhetha ukhuni lodonga izindonga, kufanele kuqala ukujwayelana ubuchwepheshe babo obandayo, okuyinto kakhulu kuhluke indlela esetshenziswa lapho gluing sangemuva evamile. Uma une nakho clapboard, wayesezibeka yizinkuni akukho nobunzima. Lapho usebenzisa i-kukakhokho lodonga kuyinto efiselekayo ukulungiselela ebusweni kahle, ngoba kumele kube flat ngokuphelele.
Ukwakha ebusweni ezifanele kakhulu kungcono ukusebenzisa substrate wholemeal. Ezimweni ezimbi kakhulu, ungenza Uhlaka sephrofayela, usebenzisa ibhodi okuzokwenziwa eziboshiwe sekugcineni. Kodwa kubalulekile ukuba unikele isikhala ewusizo egumbini. Uma njengendlela base anolaka izosebenzisa OSB, kubalulekile ukuba pretreat kobuso impregnation zokuzivikela ezidala.
Izinkuni lodonga izindonga, izithombe zazo zingatholakala esihlokweni ngesisekelo bunks embondelene. Ukuze inqubo kuyoba kudingekile ukulungisa izinzipho ne ezincane, okuyinto avimbekile ngesando encane. Lapho usebenzisa i-yokwakha yaseGrisi lodonga isebenzisa ubuchwepheshe efanayo gluing lephepha, idinga ukuba bathole Ukwakheka ingcina. Kunamathiselwa izingcezwana kumelwe abe ilunga ngokuhlanganyela, kodwa ukwakheka Slots badinga bonyana batshidze izicezu kusukela impahla esele.
Finishing izindonga lodonga sokhuni amelwa nemishayo, uvalwe zifakwa nomunye, eziqala inhlangano lath enikeza igebe ezishisayo phakathi yokuqedela nodonga main. Imisuka lath kufanele ibekwe perpendicular panel lodonga. I ngokuvamile likhreyithi wenziwe izinkuni ezomile - Libhala kwesigaba 20x50 mm. Abakwazi ukuqinisa odongeni usebenzisa ngezikulufo, esilinganayo ihlukaniswa ngamasentimitha 50.
Ithiphu Iseluleki ukufakwa lodonga lokhuni
Ngaphambi axube sangemuva lokhuni Kunconywa ukuba bawasuse isembozo bese ufaka bayifaka izicucu 10. Elements abekwa phakathi zokhuni. Ukuze ukulungisa izakhi ohlelweni sheathing kumele kusetshenziswe klyaymery, emelelwa metal ukudla. Lezi izikopelo awashintsheki nemigoqo, ogama ubude 20 mm.
Klyaymery ogibele ibha ngalinye ibanga elilinganayo kusuka odongeni noma yiphansi. Ukuze unikeze elihlangana baqinisa, lodonga panel ngokhuni eqondiswa likhreyithi nge ngezikulufo. inkatho Ngamunye ibhodi elilandelayo kumele ohlanganiswe spike langaphambilini, obekungenza kokungathembeki ezifihliwe. Ngemva kokuphothulwa ukufakwa indawo emalungeni ovundlile ungakwazi ukuhlobisa isakhiwo ngokhuni, futhi amagumbi amakamelo asethwe izindawo ezikhethekile ukuthi zidayisa umnyango isakhiwo esitolo izinto izingxenye.
Ungakhohlwa ukuthi ngaphambi zokukhwabanisa Kunconywa ukuthenga skirting amabhodi sokhuni, okuyinto efakwe ophahleni futhi phansi. Izinkuni lodonga izindonga, ukufakwa zazo ungenza ngelakho, emva kokuphothulwa imisebenzi ngokuvamile imbozwe impregnation, upende noma amafutha akhethekile. Lokhu kuzokwenza ukunweba ukuphila kwabo inkonzo.
Gluing kukakhokho lodonga nezinkuni njengoba yokwakha yaseGrisi
Uma uthenge ukhuni yokwakha yaseGrisi lodonga ukuthi senqubo yokukhiqiza esetshenziswe iphepha isizinda, ubuchwepheshe yokumiswa yabo uyofana nokusebenzisa yamaphephadonga ezivamile. Ngaphambi ekuqaleni imisebenzi kubalulekile usimende odongeni aphathe Ukwakheka primer, okuyinto Uyoqeda ukumuncwa ngokweqile ingcina amanzi-based. Uma uyikha phezulu le sokuqanjwa ingcina sisetshenziswa, pre-cut amashidi awashintsheki ilunga ngokuhlanganyela. Umklamo amaqabunga inzima kakhulu ukuthi asebenze. Ngemva ukulungiselela owandulelayo kwezindonga kunesitha ngempela kukhathaza.
Izinkuni lodonga elingaphakathi yinhle kakhulu, okuyinto wabenza ithandwe. Uma uthenge ukushintshashintsha kukakhokho yalo, ukufakwa kwabo, ungasebenzisa i Ukwakheka ingcina izindwangu esindayo. Roll iyasikwa ibe bands ngazinye usayizi kulungile bese kwesokunxele ngoba ngosuku acclimatization. Egumbini kungabikho okusalungiswa, phakathi kwezinye izinto, akufanele wadalula ngqo kwelanga udonga. Ngo ukwakheka kuwebhu kufanele usetshenziswe ijazi roller, pre-uthathe amashidi ummese kanye sikelo.
Ngezikhathi ebusweni kuyadingeka ukuthi unikezele a roll iraba, ngaphandle ingress ingcina kuya phambi kobuso enamathela. Uma lokhu kwenzeka, ukwakheka kumele bavunyelwe ukuba ome, abese isuse kuso. Lapho kokuqeda engeli kudingeka bathathe isinyathelo ngokucophelela okukhulu, njengoba eguqa blade imiphetho kungenziwa embozwe ukuqhekeka.
Izici lodonga lokhuni "Gusvarblok"
Izinkuni lodonga izindonga panel "Gusvarblok" kuthiwa profiled, okungaletha imibala ehlukene, izitayela kanye indlela yokwenza. Ukuvakashela esitolo, uzothola imigqa ezintathu, ngamunye okuyinto unamahlangothi lalo. Eyokuqala unamahlangothi 12,5x96 mm, kwesibili - 18x120 mm, kanti eyesithathu - 20x140 amamilimitha angu. Kuye ukuphakama ophahleni kanye izintandokazi zabo siqu, ungakhetha noma iyiphi ubude imidwebo, okuyinto zokhahlamba kusuka 2.4 kuya 6 amamitha. Umswakama okuqukethwe oluhambisana amaphesenti 14, asetshenziswa womshini uphayini sonwele. Ngaphansi ngokuvamile, umklami usebenzisa umsedari, e-aspen, yebo isihlekehleke somuthi, larch kanye Alder. Imikhiqizo athunyelwa Nciphisa ifilimu esivikela impahla ngesikhathi yezokuthutha athula. Ngaphambi kokuqala ukufakwa iphakethe kuyadingeka ukuqeda.
Kaningi Abathengi yesimanje namuhla Ukhetha lodonga for izindonga lokhuni. amabhodi Nquma uyokwazi ukukhweza bebodwa, emva kokuphothulwa amalunga ezivuzayo ngokuphelele angeke ibonwe njengoba imikhiqizo ifa interlocks ekhethekile. Ngenxa ezifihliwe dock ugodo unawo amandla ukuba sikwazi ukuphefumula, okuyinto evimbela ukwakheka isikhunta nangesikhunta phezu.
Wumoya ifilimu - vetrogidrozaschity impahla
Iwindi emthambekeni yangaphandle: kukhethwa zokwakha kanye yokufaka
Ukubuyiselwa khiye ngendlela umnyango metal: izinkinga?
Ukuqaqa ethoyilethi ngezandla zakhe - izici kanye nezincomo
Umlando laseGibhithe: Reality Inkolelo
Kanjani ukusuka Anapa eCrimea? Kusukela Anapa eCrimea hamba ngebhasi, isitimela, isikebhe noma isikebhe
Indzaba "Mina kanjani wayezochitha ehlobo, okuyinto angikwazi ungalokothi ukhohlwe"
YeNkosi Indian Defence in chess: izinketho esiyinhloko draw
Camille Pissarro: imidwebo futhi ukuphila
Mathewu St. Clair: Biography nemisebenzi
Hooliganism - ke ... Article 213 of Criminal Code: hooliganism